ብቻ 13 አክሲዮን ውስጥ ይቀራል.የተገመተው የመላኪያ ቀን: Feb. 25 - መጋቢት 3 ተመዝግበው የተፋጠኑ መላኪያ መምረጥ ጊዜ.ከ መርከቦች እና ቢራ Snob Barware Co. በ የተሸጡ
マーケットウォッチ :: CE Credits with MainStay‎ :: Chipotle Mexican Grill‎
by Admin on Tue Feb 23, 2016 3:47 am
by Admin on Tue Feb 23, 2016 3:48 am
Uma kuziwa ukuthanda, umama uyazi best. Ikakhulukazi uma umama wakho kuyinto Goldie Hawn. Futhi kubonakala Goldie abelane ezinye ubuhlobo bakhe ukuhlakanipha nendodakazi Kate Hudson.
Lo mlingisi oneminyaka engu-36 ubudala dished on singakanani yena Uyazazisa ubuhlobo oneminyaka engu-33 nonina anabo Kurt Russell wathatha isikhashana ukwabelana quintessential uthando iseluleko nonina kuye kwamnikeza.
"Ngicabanga ukuthi abanakho, mayelana uxhumano, akuvamile ngempela futhi enhle futhi into efunekayo," Hudson etshela ET emcimbini ukukhuthaza incwadi yakhe entsha, "Pretty Happy." "Kodwa-ke akwenzeki ngaphandle izinto zalo, [njengoba kunjalo] nabo bonke ubuhlobo anabo."
Hawn futhi Russell wanquma ukuba angashadi, kodwa minyaka sabo sobambiswano uye wabenza isibonelo of ubudlelwano yimpumelelo yesikhathi eside in Hollywood.
Hudson uthi umama wakhe akushilo into ebaluleke kakhulu ubuhlobo hhayi ukulahlekelwa wedwa. "Thembekani ngokwakho," Hudson yayisemngceleni iseluleko esingcono umama wakhe kuye kwamnikeza. "Lapho nje kokuthi uxhumeke ngokuseduze [nothile], kuyisikhathi omkhulu sokukhula."
Naphezu isibopho sabo obuseduze, Hawn akukhulumile ngokubaluleka yokupha omunye nomunye isikhala nobuhlobo.
"Kumayelana ukulahlekelwa wena nomunye. Ukuba ndawonye, ​​izinsika ezimbili bephakamise indlu kanye ophahleni, futhi ngihlukile, hhayi kokuba Sivumelana kuzo zonke izinto," Hawn wathi, in an interview.
Enye nehlala njalo Hollywood umbhangqwana, Dame uHelen Mirren nomyeni Taylor Hackford, banezinto ifilosofi efanayo. Mirren usanda kusho sihluthulelo sokugcina ilangabi uya onamandla "sichitha isikhathi esiningi bengekho ndawonye."
Hawn futhi Russell zisasetshenziswa wayebathanda-up, ngemva kweminyaka engamashumi amathathu, futhi bathi usalokhu sihlushwa umshado amahlebezi - okuyinto bayaqhubeka ukudubula phansi.
Jump to: Select a forum||--CE Credits with MainStay‎ |--Chipotle Mexican Grill‎ |--Sunoco Gas‎ |--Esquire - Men's Fashion,